मनोरन्जन – NRN Khabar
गोर्खाली समाज युकेको अध्यक्षमा अशोक ढकालले गरे उम्मेदवारी घोषणा... April 21, 2022
एस आई युकेले जुन ११, २०२२ मा ५० भन्दा बढि युके युनिभर्सिटी सहभागि हुने गरी होटल... April 19, 2022
कांग्रेसले गठबन्धन नगरे हालत पहिलेकै जस्तो हुन्छ – प्रधानमन्त्री देउवा... April 19, 2022
नागरिता र ब्रिटिश गोरखाका समस्या समाधानको गर्नका एनआरएनए महासचिब का प्रत्यासी... December 16, 2021
मिस यूनिभर्समा भोट गर्न अंशिका शर्माले गरिन् यस्तो अपिल
काठमाडौंं । मिस युनिभर्स प्रतियोगिताको ६९ औं संस्करणमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेकी अंशिका शर्माले भोट गर्न सबैमा अपिल गर्नुभएको छ । यहि मे १६ तारिखका दिन हुन लागेको मिस यूनिभर्सका लागि अनलाईन भोटिङ खुल्ला भइसकेकाले आफूलाई भोट गर्न अंशिकाले अपिल गर्नुभएको हो । अंशिकाले भोट गर्नका लागि एम यू
६९ औं मिस युनिवर्समा नेपालको राष्ट्रिय पोशाक पर्वतारोहीको सम्झनामा समर्पित गरिने
काठमाडौँ । ६९ औं मिस युनिवर्समा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय पोशाक पर्वतारोहीको सम्झनामा समर्पित गरिने भएको छ । हरेक बर्ष विश्वभरबाट मानिसहरु हिमालका लागि नेपाल आउने गरेकोमा यस वर्ष भने मिस युनिवर्सको माध्यमबाट हिमालहरुलाई विश्वमा चिनाइने भएको छ । मिस युनिवर्स प्रतियोगिताको ६९औं संस्करणका लागि अंशिक
न्यूर्योक । मिस युनिवर्स प्रतियोगिताको ६९औं संस्करणमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अंशिका शर्मा अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको छ । मिस युनिवर्स प्रतियोगिताको लागि अंशिका अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको हो । मिस युनिवर्स यही मे १६ का दिन हलिवुड (फ्लोरिडा) को सेमिनोल हार्ड रक होटल एण्ड क्यासिनोमा हुँदैछ । व
वलीकाे एनआरएनए आइसीसी सचिवमा उम्मेदवारी
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघको आगामी काठमाण्डौंमा हुनलागेको अक्टोबर १५ देखि १७ सम्मको विश्व सम्मेलनमा दिपक प्रसाद वलीले एनआरएनए आइसीसीको सचिवमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन । वलिले संस्थाले दिएको जिम्मेवारीलाई जुनसुकै हालतमा पनि पुरा गर्ने भन्दै संस्थाको विकासका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका
धेरै कमाउने गायिकामा टेलर स्विफ्ट
एजेन्सी, संसारकै सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने हलिउड गायिका टेलर स्विफ्ट बनेकी छिन् । फोब्र्सले जारी गरेको गायक गायिकाहरूको सूचीमा टेलर सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने गायिकामा परेकी हुन् । फोब्र्सका अनुसार टेलरको सालाखाला आम्दानी १८५ मिलियन डलर रहेको छ । उनको एक दिनको कमाई ५.६ लाख डलर रहेको छ । उनीपछि द
टीकाको साइत सार्वजनिक
काठमाडौँ, २२ भदौ । यस वर्षको दसैँको टीकाको साइत नेपाल पञ्चांग निर्णायक समितिले सार्वजनिक गरेको छ। समितिले टीकाको साइत असोज २१ गते बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा रहेको जनाएको छ । १२ गते आइतबार बिहान १० बजेर ३५ मिनेटमा घटस्थापनाको साइत रहेको भने मंगलबार बिहान ८ बजेर ४५ मिनेटमा देवी विसर्जनको शुभ स
आज हरितालिका तीज
काठमाडौँ, १६ भदौ । आज नेपाली नारीहरूको हरितालिका तीज देवाधिदेव महादेवको पूज-अर्चना गरी मनाउँदैछन् । आज बिहानैदेखि पशुपति लगायत देशैभरिका शिव मन्दिरहरुमा व्रतालु महिलाहरुको भीड लागेको छ । सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने बरदान पाएको किंवदन्ती अनुस
राष्ट्रपतिद्वारा नारीहरूको महान् पर्व तिजको शुभकामना
काठमाडौँ, १६ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली नारीहरूको महान् पर्व हरितालिकाको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीमा सुख, शान्ति, समृद्धि, आपसी एकता, पारिवारिक सद्भाव एवम् सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपतिले आज शुभकामना सन्देश
खानमा आधारित फिल्म बन्ने
एजेन्सी, १२ भदौ । बलिउड नायिका जिया खानमा आधारित फिल्म बन्ने भएको छ । सन् २०१३ मा पंखामा डोरी बाँधेर झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । तर उनको मृत्युपछि हत्या र आत्महत्या के हो भन्ने रहस्य बाहिर आउन सकेन । अभिनेत्री जिया खानको जीवनलाई आधार मानेर डकुमेन्ट्री बन्न लागेको हो । जिया खानको मृत्युस
शाहिदकी श्रीमती मीरा फिल्ममा आउने
एजेन्सी, ११ भदौ । अभिनेता शाहिद कपुरकी श्रीमती मीरा राजपुत अब फिल्म आउने चर्चा भईरहेको छ । शाहिदलाई एउटा अन्तर्वार्ताका क्रममा श्रीमती मीरा फिल्ममा कहिलेदेखि आउने छिन् ? भन्ने जिज्ञासा राखिएको थियो । सो जिज्ञासामा शाहिदले भनेका छन, ‘म जे गरिरहेको हुन्छु, त्यसमा मीराको पूर्ण साथ र समर्थन हुन्
एनआरएन खबर मिडिया प्रा. लि. , दरबारमार्ग , काठमाडौँ